Kusvira nyoro musikana wandanga ndapa lift kuenda kuChitungwiza – Vanoda Zvinhu
Zuro chaiye ndichibva muguta medu umu ndaisada kutakura munhu nokuti ndaiva ndisingadi zvokumira-mira mu road. Ndakati ndichangobuda pa flyover paye paye muna Seke Road akomana woye chitaurirwa hunyimwa, mwanasikana aiva akaumbwa iyeye handina kuziva kuti ndakatsika mabrake sei ndichimira paaive achimisira malift. Akati iye aienda kwaMakoni asi ini ndakangoti pinda tiende kunyangwe hangu ini ndaigara ku Zengeza.
Akapinda akagara hake mumota achinyemwerera zvokuti anditore moyo nekuda kwerunako rwake. “Mufunge henyu sister ka makanaka end makarurama semukaka unoruramisa vacheche.” Ndakadaro uku ndichisimudza mota, ndakaona kuti ndikanonoka ndaizosvika kwataienda pasina chabuda. Chimoko chakangosekerera ndokuti “thank you” ndokunyarara hake.
Chimoko chakati chainzi Pamela, handizivi kana akandinyepera but I wasn’t to care nokuti ini changu ndaingoda kurova mheche chete nokuti mwana ndaive ndamuda. Iye akazoti varume vanenge mbeva kana kuti makonzo anongoda kupinda mumwena wese wese. Ndakati imi ndimi munokonzeresa just imaging fashion iyi yawakarova iyi ingatadzisa here mboro kumira. Handina kumboda kurova mupini ndaviga imbwa. Aiva akarova katop kaye kanonzi one arm zvokuti waiona hafu yese ye zamu iri pachena. Ka track bottom kaiva akapfeka kaiva kakati mba mba mba kakashepa munhu sezvaari zvokuti waitoona kundindikira kwebeche rake.
Ndakamisa mota pamwe pa fuel station panonzi Pachinhamo, ndakabuda mumota ndokunotenga ma soft drinks, fresh chips and quarter chicken. Chimoko ukachitengera this kind of food munobva mangochata ka one. Ndamupa food yake ini ndokusara neyanguwo ndokutanga kutaura hedu nyaya tigere mumota. Nyaya dzakatsva kunge taiva tichiziva zvokuti aiva ava kutoseka achindirova pabendekete rangu. Ndakamubata pachiboda pake apa ndichimubvunza if she gona make me happy today. Akamboda kuramba asi ini ndakaramba ndichimu softa kusvikira adyira. Akazoti iye it was just for that day because aiva nemuface wake aida kuzomuroora mazuva mashoma aitevera.
Ndakamutsa mota ndonanga paChikwanha nokuti ndiyo nzvimbo chete yaiva pedyo panama booking house, ndakaona kuti ndikaita zvokunonoka aizochinja mind nokuti aisava mu sells woman I think you know what I mean. Zvechokwadi kutaura chokwadi handina kuziva kuti tasvika sei panzvimbo yandambotaura iyi nokuti panoitwa zvese ipapo ukaita zvokupusa unogona kusangana nemukadzi wako achibva kunosvirwa nemumwe murume ukakomita susaidhi.
Ndakabhuka 2 hours dzangu muroom yaiva yakagadzirwawo bho bho. Takapinda ndokugara pabed iye ari padivi pangu, ndakaona kuti aitya uye kunyara semunhu aiva asina kuzvijaira. Ndakatanga nekumukissa pamuromo chaipo kudzamara rurimi rwangu rwava mukanwe make. Ndakamupuruzira musoro wake ndichidhonza dhonza madreads aaiva akarukwa. Ndakaramba ndichidaro tichingosvetana. Ndakazotanga kumubvisa hembe dzake dzose I mean dzose hadzo. Iniwo ndakazozvibvisa dzangu apa mboro yangu yaiva yamira kuti twi tsinga dzayo dzakati tara tara kunge midzi yeparuware.
Ndakakwira pamusoro pake ndokutanga kuyamwa zamu rake rekuleft uku ndichitambisa tambisa ka nipple kake kekurudyi. Ndakazodzikisa rumwe ruoko kubeche rake ndikanzwa kuti raiva ratotota kare. Aiva ne beche riripakati nepakati, pamatinji chete mwana aiva nechipo iyeye. Ndakatanga kuadhonza zvinyoro nyoro uku ndichiti ndikayamwa zamu iri ndochinja ndoyamwa rimwe chokwadi mwana akanakirwa ndisati ndaisa mboro yangu mumheche yake yaiva zvino yava kutofira nezemo.
Ndakabata mboro yangu ndokutanga kurova rova matinji ake pamwe nemumativi ebeche uku aiva zvino avhura makumbo ake and she was ready to be f*cked and me too I was also ready. Ini kana ndichisvira chimoko for the first time handidi kuti azofamba achindishora kuti ndakangoita hwetsuro kana kuti huku inongoti ikakwira yavakuto producer. Mukadzi anofanira kuzokunetsa kuti ari kuda kukwirwa newe futi, zvekuti kana akaroorwa nemumwe murume unotosimba kuramba nokuti unenge wakamusvitsa pa last point yake yekunakirwa. Pamela akazoita zviye zvokubata mboro yangu oipinza mubeche make nokuti ndaiva ndatomunonokera.
I started in slow motion kuitira kuti ndisakurumidze kutunda nokuti beche raipisirira iroro plus kahu tight kacho ndakapakutenda ndega. Mwana akachemerera nokunakirwa uku ini ndaiwedzera speed mbichana mbichana. Ngakazochinja style ndaona kuti ndingatunde iye asati zvikazonetsa. Ndakarara padivi pake ndokusimudza gumbo rake one ndokuipfekera uku ndakabata zamu rake rekuruboshwe ndichitambisa nipple rake. Handichazivi kuti ndiyani akandiudza kuti zamu reku left riri sensible saka ndakabva ndangozvi believer. Handina kuda kuwanza mastaira nokuti aizonyumwa kuti ndiri mukwiri mukuru uye hure zvaro akasazoda kundiona zvakare.
Ikozvino ndaiva ndava kukovira zvine a little bit impact, ndakawedzera speed zvokuti nokuti ini kutaura chokwadi ndakanakirwa ne mwana uyu. Pachikapa aisakwanisa hake asi muzungunutsiro waaiita chiuno chake wakandiomesa mate mukanwe. Aiti akachimonyorora okoira koira sezviya zvinoita Beyonce kana makamboona ma video ake. “Amai kani amai kani a a a aa a aa aa amaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiii kaaaaaaannniii” akadaro mwana wavaridzi achitunda zvokuti ndakanzwa hurume hwanguwo houya zvokuti pakanga pasisina yekutamba.
Ndakanyatsomubatirira ndichikovira zvine power zvokuti neniwo ndakaridzawo kamhere kekunakirwa. Takagumbatirana takadaro kwemaminitsi maviri ose tatunda tichimirira hedu round two. Mwana akafara zvokuti akazondiudza kuti aino udza mukomana wake kuti kuti …
Ko iwe unofunga kuti ainomuudza kuti kudii ???
Next story Kutadza kusvira iro beche ndichiriona
Previous story House Share, Kusvirwa neboyfriend yeshamwari yangu